‘शा ‘रिरीक स’म्प र्क गर्दा–ग’र्दै यु’वतीको नि’धन, यु’वक प’क्राउ”!! – Gazabkonews
‘शा ‘रिरीक स’म्प र्क गर्दा–ग’र्दै यु’वतीको नि’धन, यु’वक प’क्राउ”!!
in मनोरञ्जन, विचित्र संसार
हरेक ब्य क्तीले आफ्नो यौ न जीवन सुखद होस् भन्ने कामना गर्दछन् । यसका लागि उनिहरुले अनेक प्रयत्न पनि गर्दछन् । अहिलेको समयमा याै न उ त्तेनाको ला’गि अनेक अाैषधि समेत उप ल्बध् छन । यस्तै एक जो’डिले शा;रि;रीक सु;खका लागि ;प;हिले औ षधीको से वन गरेर शा रिरीक सु खको का;र्यमा रहे ।
तर दुर्भा;ग्य यसका का;रण युव;तीले ज्या;न गु;माउन पुगिन् । शा;रि;रीक सु;खभो;ग प्रा;कृतिक कु;रा हो भन्ने जा;न्दा जा;न्दै यसको प्रा;कृतिक नियम वि;परीत जाँ;दा मा;निसको जी;वन आ;नन्दमय हुनु;को सा;टो क;ष्टसा;ध्य हुने मात्र हैन मृ; त्युका मुख मा स मेत पु ग्दछ । भा रतको गुज रातका २६ वर्षिया यु;वक कि;शोर गु;प्ताले औ;षधि से;वन ग;रेर आ;फ्नी के;टी साथी निता;सँग शा;रि;री;क सु;खभा;ग ग;र्दा नि;ताको मृ त्यु भएको हो ।
गु;प्ताले सो औ;षधि खाए;पछि आ;फुलाई ;था;म्न नस;क्दा मृ;त्यु भ;एको गु;जारत प्र;हरीले ज;नाएको छ । कि;शोरको बयानलाई आ;धार मा;न्दै भार;तीय मि;डियाले ले;खेका छ;न्‘ नि;ता र कि;शोरबीच नि;यमित शा;रि;रीक सुख;भोग हु;ने गरेको भएपनि मङग;लबार कि;शोर कि;शोरीले नै औ;षधि खा;एर शा;रि;रीक सु;खभो;ग लि;न था;लेका थिए ।’ अत्याधिक इ;च्छाले यु;वकको ह;र्कत ति;ब्र ब;न्यो र यु;वती;को गो;प्य अं;गमा चो;ट पुगेप;छि मृ;त्यु हु;न पुगेको बता;एको छ ।